बाहिरी फर्निचरका लागि सामग्री छनौट गर्न कुन कारकहरू विचार गर्नुपर्छ?
गर्मी आउँदैछ, र आउटडोर फर्नीचर चाँडै प्रयोग हुनेछ। तपाईं विचार गर्न सक्नुहुनेछ कि बाहिरी फर्नीचरको टेबुल, कुर्सी र सोफाजस्ता इनडोर फर्नीचर जस्ता सुविधाहरू हुनुपर्दछ, जस्तै स्थायित्व, आराम र शैली (र निश्चित रूपमा मूल्य)। यी आवश्यक छन्। तर मुख्य फरक ...
फर्नीचर पनि कला हुन सक्छ
केही फर्नीचर आफैंमा मूर्तिकला सामग्री हुन्छ, विशेष गरी ती काठ, धातु, सिरेमिक वा रालका, जुन व्यावहारिक सिट बाहेक अर्को कोटीमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। यदि सम्भव छ भने, कलाकारलाई सोध्नुहोस् तपाईंको बगैचा र फर्निचर कहाँ राखिएको छ, वा उहाँलाई धेरै भन्दा धेरै प्रदान गर्नुहोस्।
बाहिरी फर्नीचरको लागि के आवश्यकताहरू छन्?
आउटडोर फर्नीचरलाई आउटडोर वातावरणसँग अनुकूल बनाउन र बाहिरी वातावरणमा मानिसहरूलाई फुर्सत र आरामदायक गतिविधिहरू बनाउनको लागि, आउटडोर फर्निचरको प्राय: निम्न आवश्यकताहरू हुन्छन्: १. लामो सेवा जीवन, टिकाऊ बाहिरी फर्नीचरको तुलनामा, सबैभन्दा प्रमिनन .. ।